Rosia: Anarana mitovy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2018 13:22 GMT
Raha niala tamin'ny tantara an-tsehatra sy ny vazivazy ara-politika Okrainiana, ity misy tantara momba ny anarana mitovy, navoakan'ilay Tsetsenina mpanao gazety Timur Aliev (mpisera LJ timur_aliev, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety The Chechen Society, ary tonian-dahatsoratra Chechnya ao amin'ny Ivon-toerana Fitaterana momba ny ady sy ny fandriampahalemana)::
Izaho sy ny Timur Alievs hafa
Dimy na enin-taona lasa izay, nikaroka voalohany ny anarako tao amin'ny [Yandex] aho ary gaga nahita fa izaho, na, raha ny marina kokoa, i Timur Aliev “dia nandositra avy tany am-ponja izay nanasaziana ahy higadra mandra-pahafaty noho ny asa fampihorohoroana sy fanodinkodinam-bola fanampiana”!!!
Nahita io “laza” io dia an'ny anarana feno avy amin'ny [Dagestan]. Roa taona taty aoriana, nihaona tamin'ny mpiara-mianatra taloha tamin'ity olona ity aho, ary nizara ny antsipiriany momba ny fiainan'i Timur Aliev tamiko izy. Tsy tsaroako ny zava-nitranga taminy taorian'izay, saingy tsaroako ny natahorako nandeha tamin'ny toeram-pisavana nandritra ny fotoana maharitra – satria mety hanafangaro anay izy ireo. Na dia tsy mitovy aza ny toerana sy ny taona nahaterahanay.
Ankoatra izany, betsaka ny anarana Timurs Alievs eto amin'izao tontolo izao. Efa “nijaly” noho ny amiko ny roa amin'izy ireo. Ary niezaka nihaona tamin'izy roa tonta ireo aho.
Mipetraka any [Makhachkala] ny iray, ary hita fa mpanao gazety koa izy, miasa ao amin'ny gazety ao an-toerana Chernovik (“Kisoritsori-drafitra”) sy ao amin'ny tranokala Caucasusian Knot. Taorian'ny iray tamin'ireo fanehoan-kevitra nataoko tamin'ny BBC mikasika ny toe-draharaha tany Dagestan, nahazo antso avy amin'ny polisy teo an-toerana izy, izay nilaza taminy zavatra toy izao, “Inona no eritreritinao fa nataonao, ry adala?” Tsy niraharaha ny ezaka nataony mba handresen-dahatra azy ireo izy ireo fa tsy izy no nanao izany: niantso sy nandrahona azy imbetsaka izy ireo. Niafara tamin'ny fanovana ny fanampin'anarany ho Isaev izy- izay mampihomehy ihany koa, satria Isaeva no fanampin'anaran'ny vadiko. Na ahoana na ahoana, ny fiantsoana azy ankehitriny dia Timur Isaev ary tahaka ny zavatra mahazatra izany. Tamin'ny herintaona, nanao seminera tao Makhachkala izahay ary tao ny anarana mitovy amiko. Nihaona taminy ihany aho, saingy tsy afaka milaza aho fa faly tamin'izany izy.
Ny Timur Aliev iray hafa dia miasa ho mpamily ao amin'ny biraon'ny UNHCR ao Vladikavkaz] sy [Nazran]. Nahita azy aho herinandro vitsy lasa izay […]. Nanatona ahy izy. Hita fa mahazo antso an-telefonina matetika avy amin'ireo mpanao gazety ao amin'ny CNN, ny BBC sy ny media hafa izy, mangataka azy haneho hevitra momba ny toe-javatra any Tsetsenia sy Kaokazy. Nilaza tamiko avy hatrany izy hoe: “Tsy i Timur Aliev izay tadiavinao aho.” Nolazaiko fa manomboka izao, tokony haneho hevitra amin'ny anaran'i Timur Aliev izy. Na izany aza, misy ny fotoana izay tsy nahafahana nahazo ahy – ary afaka nampitombo ny isako tsy nanao ezaka aho 🙂
Indray andro, Timur Aliev ny namako sady mpiara-miasa amiko – nilaza tamiko fa izy tenany. Nanoratra lahatsoratra somary henjana ho an'ny gazety federaly izy ary nanasonia izany tamin'ny solon'anarana. Saingy solon'anarana ho azy izany – raha ho ahy, dia anarako manokana.
Indray mandeha, nahita fanamarihana iray hafa Timur Aliev aho – mafioso avy any [Tashkent] (araka ny nosoratan'izy ireo tao amin'ny lahatsoratra). Saingy tsy azoko hoe iza marina izy ary inona no mampalaza azy – satria nosoratana tamin'ny fiteny Ozbeka ny lahatsoratra..
Indraindray, hita ao amin'ny Google sy Yandex ny anarana Timur Alievs isan-karazany. Ny sasany amin'izy ireo dia manamboatra kebabs trondro tsara, ny hafa nianatra tany [Dushanbe] ary tadiavin'ireo mpiara-mianatra aminy ankehitriny, ny iray hafa kosa mpikambana ao amin'ny ekipa mpibata fonjamby any amin'ny Farany Atsinanana. Ny Timur Aliev iray, fanta-daza amin'ny “sidina avo indrindra amin'ny quarterbacks” – na inona na inona izany. Ary ny iray hafa dia manana arabe ao [Baku] izay nomena ny anarany – ao no misy ny masoivohon'i Polonina ao Azerbaijan.
Fa ny Timur Aliev (manaraka ahy) faharoa matetika voatonona dia ilay miasa ho solontenan'i Skoda ao Rosia. Maneho hevitra mandrakariva amin'ny gazety izy, ary indrindray, mipoitra ao amin'ny tranonkala, miaraka amin'ny sarin'ireo fiara Skoda vaovao ny sariny.
Na izany na tsy izany, maro be isika, Timurs Alievs. Saingy tsy mieritreritra aho fa ny fahafantarako izany dia hamela ahy hampiasa azy io. Ary tsy azoko antoka akory hoe inona no tsara kokoa – manana anarana miavaka sa ilay iray mahazatra sy be mpampiasa?
Somary mahagaga, fa niteraka adihevitra ara-politika kely, na dia mampihomehy aza ity lahatsoratra tsy ara-politika ity – adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ao Rosia sy izay mety ho mpandimby an'i Vladimir Putin (ary mbola tsy voatonona anarana):
Erpert: Navoakanao ny olana manan-danja indrindra androany! Alaivo sary an-tsaina raha lasa filohan'ny Rosia manaraka i [Ivanov] or [Medvedev]? Inona no hitranga raha manomboka manome baiko ho komandy faratampony ny Ivanov sasany adala?
Ary raha manomboka manome resadresaka amin'ny fampahalalam-baovao ny Rosiana Sergeis Ivanovs sy Dmitrys Medvedev rehetra – hikorontana izao tontolo izao!
timur_aliev: Tsy azo avela izany … Aoka tsy hamela an'i Ivanov sy Medvedev hirotsaka ho filoha … :)) [Zhirinovksy] no mety tsara amin'ity lafiny ity, na izany aza … :))
8 ora izayBelarosia